खुशीको खबर ! पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य घट्यो – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/खुशीको खबर ! पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य घट्यो
खुशीको खबर ! पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य घट्यो
नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य घटाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेसँगै भारतबाट मूल्य घटेर आएकाले नेपालमा समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ। जसअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ, डिजेलमा २ रुपैयाँ र मट्टितेलमा २ रुपैयाँ घटेको छ।
अब पेट्रोलको मूल्य काठमाडौंमा प्रतिलिटर १०६ रुपैयाँ कायम भएको छ। डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर ९५ रुपैयाँ कायम भएको छ। घटेको मूल्य सोमबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने निगमले जनाएको छ।
भूकम्पले क्षतिग्रस्त नेपालकै पहिलो स्कुल दरबार हाइस्कुलले पायो नयाँ रुप
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय (सूचीसहित)
देशभरि सबै शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने सरकारको निर्णय, कसै संग अङ्कमाल नगर्न तथा हात नमिलाउन डाक्टरको सुझाव !
फेरि अर्को बज्रपात भर्खरै त्रिभुबन बिमानस्थलमा आगलागी !